Doodda BBC ee toddobaadkan - BBC News Somali
Doodda BBC ee toddobaadkan
Toddobaadkan BBC-du waxay ka hadlaysaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka madowga ah ee u soo haajiray waddanka Ingiriiska.
Waxaa dhowaan isbeddello lagu sameeyay sharciyada lagula dhaqmo dadka ajnabiga ah ee imanaya waddanka Ingiriiska, waxaana loo arkaa in sharciyada cusub ay ka adag yihiin kuwii hore loogu maamuli jiray dadka soo-galowga ah ee dalka Ingiriiska u yimaad sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo, waxbarasho ama qaxootinimo.
Barnaamijyada BBC-du arrintaas uga hadlayso waxaan ku eegeynaa sida ay sharciyada la adkeeyay u saameeyeen dadka madowga ah. Waxaana aan jawaab u raadinaynaa su'aasha ah 'dadka madow ma yihiin kuwo laga rabo waddanka Ingiriiska?'
Maalinta Khamiista ah ee 28-ka bishan November, laanta Af Soomaaliga ee BBC London waxay dood arrintan ku saabsan ku qabanaysaa magaalada Slough ee dalka Ingiriiska.
Waxaa doodda ka qayb gelaya aqoonyahanno xagga sharciga socdaalka qaabilsan, ganacsato, hoggaamiyeyaal bulsho oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Slough iyo dadweyne magaaladaas ku dhaqan oo isugu jira rag, haween iyo dhallinyaro intaba.
Haddii aad dooneysid inaad dooddaas ka qayb gasho, isla markaana aad ku nooshahay magaalada Slough ama magaalooyinka kale ee dalka Ingiriiska oo aad awood u leedahay inaad timaad goobta doodda lagu qabanayo waa lagu soo dhoweynayaa fikraddaadana waad ka dhiiban kartaa doodda halkaas lagu duubayo oo idaacadda laga sii deyn doono maalinta Jimcaha ee 29-ka bishan November.
Si aad u ogaatid cinwaanka goobta doodda lagu duubayo waxaad la xiriiri kartaa: Faysal Ashour oo reer Slough ah, lagana helo telefoonka: 07904470680